Tanzanite - ụdị acha odo odo na violet dị iche iche - Ike trichroism - Video
Tanzanite bụ acha anụnụ anụnụ na ụdị odo odo na-acha odo odo. Site n'ìgwè ahụ. Manuel d'Souza chọtara nnukwu nkume ahụ na 1967. Na Merelani Hills nke Manyara Region, Northern Tanzania. Na nso obodo Arusha na Ugwu Kilimanjaro. Nanị isi iyi nke Tanzanite bụ Tanzania. Na obere obere mpaghara nsị. Ogologo 7 kilomita na 2 kilomita n'obosara. Na nso Mirerani.
A na-ahụkarị ihe ndị na-akpata trichroism na Tanzanite. Ọ dị ka acha anụnụ anụnụ, nakwa violet. Burgundy dabere na nkwekọrịta kristal. O nwekwara ike ịpụta dị iche iche mgbe a na-ele ya n'okpuru ọnọdụ ọkụ ọzọ. Akwụsị na-apụta ìhè karịa mgbe e doro ya ìhè. A na-ahụ ihe na-acha odo odo anya mgbe a na-enye ya ìhè. Na ya siri ike tanzanite sie ike na-acha aja aja. Site na ọgwụgwọ okpomọkụ, ọ ga-ekwe omume iwepu agba aja aja. N'ikpeazụ, ọ na-eweta acha odo odo nke nkume ahụ.
Tanzanite ike ike
Tanzanite akụkọ ihe mere eme
Manuel d'Souza, onye na-atụ egwu ọlaedo na oge oge na Arusha Tanzania. Ọ hụrụ mpempe akwụkwọ na-acha anụnụ anụnụ na-acha odo odo na-acha odo odo na-acha odo odo na-acha odo odo na-acha odo odo na-acha odo odo na-acha odo odo na n'elu mgerani. Banyere 40 kilomita n'ebe ndịda ọwụwa anyanwụ nke Arusha. O chere na ịnweta bụ peridot. Ma mgbe ọ chọpụtara na ọ bụghị, o kwubiri na ọ bụ dumortierite. Esisịt ini ke oro ebede, John Saul ama okụt mme itiat. Onye na-ahụ maka ndị ọkà mmụta sayensị na Nairobi.
Onye na-ere ákwà na-atụ egwu nkume bụ onye na-egwupụta aquamarine mgbe ahụ na ógbè Kenya. Saul, bụ onye mesịrị chọpụta ebe a na-edebe ruby ​​a ma ama na mpaghara Tsavo nke Kenya. Ọ na-ewepụ dumortierite na cordierite dị ka ohere. Ma zigara nna ya ihe atụ. Hyman Saul, osote onyeisi oche na Saks Fifth Avenue na New York.
Shaman Saul wetara ihe atụ ahụ n'okporo ámá. Gemological Institute of America. Ha mechara chọpụta nke ọma dị ka ihe dị iche iche nke ịnweta ụlọ ọrụ.
Ndị ọkachamara na-ahụ maka ọgwụ na-ahụ maka ụkọchukwu na Harvard University. Ọzọkwa site na British Museum, na n'ikpeazụ site na Heidelberg University. Ma, onye mbụ nke ga - enweta akara aka bụ Ian McCloud. Otu onye gọọmentị gọọmentị na Tanzania nke dabeere na Dodoma.
Ndị ọkà mmụta sayensị a na-akpọ "na-acha anụnụ anụnụ". A na-edegharịrị nkume nkume ahụ dị ka tanzanite site na Tiffany & Co.. N'ihi na ha chọrọ ka ha buru ibu. Na otu ebe nke mkpuru egwu.
Site na 1967, ma eleghị anya, nde mmadụ abụọ nke tanzanite nọ na Tanzania. N'ikpeazụ, gọọmentị Tanzania mere mba ndị ahụ na 1971.
zụta tanzanite tanzania na ụlọ ahịa anyị
Tags Forsterite, wetara, sịntetik, Tanzanite
Naa na zoisite